Arzantina: Mpamoron-kira Facundo Cabral Nisy Namono Tao Goatemala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2011 10:00 GMT
Tsy maty i Facundo Cabral , maharitra mandrakizay ny lazany…
Ny marainan'ny Asabotsy 9 Jolay, nisy namono tao Goatemalà ilay mpamoron-kira malaza Facundo Cabral. Namoaka vaovao ahitana ity fehezanteny manaraka ity ny bilaogy Facundo Cabral:
Novonoin'olon-tsy fantatra i Facundo Cabral raha nitondra fiara hamonjy ny seranam-piaramanidina ao La Aurora taorian'ny fitetezam-paritra. Naratra ihany koa ny mpiasany.
Nanambara i Alberto Cortez ao Espaina fa nafangaro tamin'ny jiolahy mafia i Facundo.
Ilay Facundo-nay (Nuestro Facundo) avy amin'i Gilberto Viciedo alalana mpisera Flickr, CC by 2.0
Memorias de la tierra, avy ao Arzantina, nanamafy fa:
Tonga tao an-toerana namonoan'ny mpikarama mpamono olona ilay mpihira nandritra ny fandehanana fiara hamonjy ny seranam-piaramanidina La Aurora, ao an-drenivohitra, saiky handehanany ho any Nikaragoà i Rigoberta Menchú ilay nandrombaka ny loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana.
Tamin-dranomaso no nanambaran'ilay nahazo ny lokan'ny Fandriampahalemana momba an'i Facundo Cabral ho “maty novonoina noho ny tarigetrany”.
Facundo Cabral dia teraka tany an-tanànan'i La Plata, Arzantina tamin'ny 1937 ary ny antom-piainany dia voamariky ny fandraisana andraikitra ara-pahany sy ara-piarahamonina goavana sy tamin'ny fihirana hiram-panoherana ho fitaovam-pampielezana ny hafany. Noho izay antony izay no nahatonga azy ho sesintany tany Meksika [es] tamin'ny 1976 nandritra ny fitondra-miaramila Arzantina.
Nivezivezy tao amin'ny Twitter ny hevi-pitsipahana sy ny hirifiry vokatry ny toe-javatra, sy ny fanasongadinana ny andalana malaza sasany izay nipoitra haingana.
Any Madrid, Octavio Rojas (@octaviorojas) nanambara ny fahatairany nandre ny zava-nitranga:
Oay le! Novonoin-dry zalahy i Facundo Cabral! Fa tontolo inona ity iainantsika amonoan-dry zalahy poeta ity??!! Mandria am-piadanana. Te-ho mpamono afo ihany koa aho
Avy any México, ny Dr. César Lozano (@drcesarlozano) nahatsiahy ny tafatafa nifanaovany tamin'ilay mpihira sady mpamoron-kira:
“Mitia mandrapahatonga anao ho ilay tiavina” izany no nolazain'ilay kalaza #facundocabral ahy nandritra ny tafatafa farany nifanaovako taminy
Any Kolombia, Prospectador (@prospectador) no manoratra:
Raikitra tanteraka amin'ity tany ity… vonointsika izay mirotsaka hanamby ho olona tsaratsara kokoa sy mino fa mety hahahavita ny tsara kokoa isika. #Cabral
Mahatsiaro ny iray tamin'ireo hafany tsy fanadino i Juan David Escobar (@Elreticente) avy any Medellín:
“Tiako ny miaina satria sarotra ho ahy ny mankafy azy… Mafy tokoa izany mahatsiaro tena ho olombelona fa tsy toy ny fako” Facundo
Tao Però, @Losandespe namoaka lohateny tamin'ny sangan'asan'i Cabral ‘No estás deprimido, estás distraído’ (Tsy reran-tsaina amam-panahy ianao, fa varimbariana):
“Tsy misy ny fahafatesana… fa fifindrana any amin'ny tamin'ny toeran-kafa ihany. Miandry anao any ankoatra ny olona mahafinaritra” #FacundoCabral @Los AndesPe
José Manuel Gonzáles, (@JoseGonzales87) nilaza fat:
Tsy eto no tena fiainana. Amin'ny manaraka indray mihaona, Facundo Cabral!
Jorge Esteves (@esteves_jorge) nahatsiaro ilay mpihira John Lennon, izay nisy namono ihany koa:
Tia nanohitra i Cabral ary tia ny sainan'ny fandriampahalemana, tahaka an'i Lennon. Samy matin'ny bala ry zareo
Avy amin'io firenena io ihany i Vesania Licantropia (@Vesania_Loba) sy i Tessy Mavila (@Piery71) nisiokantsera ny heviny.
Tamin'ny fiainany dia indray i Facundo Cabral no nisiokantsera, nosokajian'i Frank Villanueva (@Fr4nK_Fk) sy i Valia Barak (@valiabarak), izay ilazany ny fahafatesana mpihira iray, Mercedes Sosa:
RT @valiabarak <@facundocabral[es]: “Tsy maty La Negra, lasa nitety faritra izy”> NY TWEET TOKANA AVY AMIN'I FACUNDO. ANKEHITRINY NITETY FARITRA IHANY KOA IZY, TSY MATY IZY.
Raha ao an-tsaina i Mercedes Sosa, Nanoratra avy any Nikaragoà i Edna Medina (@Enita5) :
Tamin'ny 9 Jolay no teraka i ‘la Negra an'i Amerika’, Mercedes Sosa, ary tamin'izany daty izany no maty tampoka nisy namono i Facundo Cabral…
María Cristina Lozada (@MariaLozadax5) ihany koa dia nanasongadina ny kisendrasendran'ny daty.
Avy any Chile, Roberto Quiñonez (@RQ 80) sy i Alesi (@alesi18), ankoatra ny hafa maro no nisiokantsera ny fihetseham-pony.
Farany, avy any Goatemalà, Pablo Juárez (@PabloJuarezG) no nanoratra:
Amin'ny maha- Goatemalteka ahy, mangataka famelan-keloka amin'ny sehatra maneratany aho noho ny fahafatesan'i Facundo Cabral. Tsy tahaka izao izahay Chapines. Azafady RETWEET
Azonao tadiavina ihany koa ny fihetseha-mpo hafa avy any Amerika Latina manontolo ao amin'ny Twitter amin'ny alalan'ny tenifototra #facundocabral sy #Cabral.
Teo ampamitàna ny fanoratana ity lahatsoratra ity moa no nandrenesanay tamin'ny alalan'ny valan-dresaka tany Goatemalà [es] fa: “Hampodiana araka izay haingana any Arzantina ny nofomangatsiakan'i Facundo Cabral. Efa eo am-pikarakarana izany ny Masoivoho Arzantina.”
Avy eo, ny BBC Mundo namoaka izao [es]: “Andeha handray ny fiaran'ny hotely ho any amin'ny seranam-piaramanidina i Cabral, saingy niaraka tamin'i Fariña izay nanolo-tena hitondra azy” (maty novonoina ihany koa i Fariña ilay mpandraharaha niaraka taminy)
“La leyenda de Facundo Cabral” [es](Tantara mahasondrian'i Facundo Cabral) tao amin'ny bilaogy Periodismo narrativo latinoamericano (Gazetim-pitantarana any Amerika Latina).
Vohikala fahatsiarovana an'i Facundo Cabral [es].
Nalaina tamin'ny fampisehoana farany nataony [es]: Facundo Cabral tany Goatemalà.
Video – fahatsiarovana [es] izay mandehandeha any amin'ny fahitalavi-panjakana any Argentina.